ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ပွဲမှာ ဂီရောက်ဂိုးသွင်းပြီးနောက် အမ်ဘက်ပီ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ? – Play Maker Sports Journal
ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ပွဲမှာ ဂီရောက်ဂိုးသွင်းပြီးနောက် အမ်ဘက်ပီ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ?
June 11, 2021 playmaker Sports News 0
L ‘Equipe သတင်းစာကအမ်ဘက်ပီကဂီရောက်ရဲ့ပြောကြားမှုအပေါ်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဘူလ္ေဂးရီးယားႏွင့္ပြဲမွာ ဂီေရာက္ဂိုးသြင္းၿပီးေနာက္ အမ္ဘက္ပီ ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္ခဲ့သလဲ?
L ‘Equipe သတင္းစာကအမ္ဘက္ပီကဂီေရာက္ရဲ႕ေျပာၾကားမႈအေပၚအႀကီးအက်ယ္ေဒါသထြက္ကာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီးျပန္လည္တုံ႔ျပန္လိုေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
နံပါတ် ၁ ဂိုးသမားအဖြစ် ကစားလို၍ ဘာစီလိုနာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို ဘူဖွန်ပယ်ချ
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ Loser Of The Season ဆုကို ဆွတ်ခူးသွားတဲ့ အာဆင်နယ်အပယ်ခံ